SAWIRO:-Madaxweynaha Soomaaliland oo Hargeysa ku Si aada ugu Soo dhaweeyey wafdi ka socda Dowladda Masar iyo warar sheegaya In dowlada masar…. - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada SAWIRO:-Madaxweynaha Soomaaliland oo Hargeysa ku Si aada ugu Soo dhaweeyey wafdi...
SAWIRO:-Madaxweynaha Soomaaliland oo Hargeysa ku Si aada ugu Soo dhaweeyey wafdi ka socda Dowladda Masar iyo warar sheegaya In dowlada masar….
Hargaysaa (Banaadirsom)-Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabiley wasiir ku xigeenka arrimaha dibeda dalka Masar, Mr. Xamdi Sanad Luza oo booqasho ku tegau Somaliland.
Waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay adkaynta xiriirka Somaliland iyo dalka Masar, taariikhda faca-weyn ee ay wadaagaan,arrimaha ganacsiga, xoolaha iyo kalluunka, waxbarashada iyo isdhex-galka xiriirka labada shacbi.
Sidoo kale waxa uu madaxweynuhu uga mahadnaqay dawladda Masar taageerada ay Somaliland ka siiso waxbarashada gaar ahaan dhinaca macalimiinta u hagarbaxday sidii ay ardayda Somaliland wax u bari lahaayeen.
Waxaana Kulankaa madaxweynaha ku wehelinaayey Madaxweyne ku xigeenka Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), wasiirrada horumarinta caafimaadka, xannaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga, wasiir ku xigeenka arrimaha dibeda iyo iskaashiga caalamiga ah.